gurmuuoromooswidin – Gurmuu Hawaasa Oromoo
Irreechaa celebration in Stockholm, Sweden, 2020
On October 28, 2020 October 28, 2020 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Oromos in Sweden celebrated Irreechaa (the annual Oromo thanksgiving ceremony) in Stockholm at lake Lötsjö.
#OromoProtest Solidarity Rally in Stockholm, Sweden, 19-08-2016
On August 17, 2016 August 17, 2016 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Ummata oromoo fii saba hunda kan biyaa Oromiyaa/Itiyoophiyaa keessatti mirgaa isaaniif falmachaa jiran kanaaf deggaarsa gochuuf hiriirri nagayaa (Demonstration), biyyaa Swidin (Sweden) magaalaa Stockholm keessatti qophaa’e jira. Kanaafuu gaafa 19-08-2016 sa’a 14:00 irraa eegalee eddoo Sergels torg (T-Centralen) argamuun akka hirmaatan kabajaan isiin gaafanna.
Waamicha Saganta Waldaa Warra Wangeelaa Oromoo Stockholm Ebla 30 hanga Caamsaa 1,2016
On April 6, 2016 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta’u.Attam jirtu ?
Nanamana inni isin amanattan Waaqayyoo iddoo jirtanitti karaa hundumaa nagaatti akka inni isin eegu.
Waldaan Afaan Oromoo magalaa Stockholm keessatti mana nama dhuunfaatti eegaluun isaa wagaa lama yoo lakka’e illee iddoo itti wal-geenyee Waaqayyoon waliin Waaqeffannu magaalaa Stockholm keessaa argachuun keenya reefuu ji’a sadii guuta. Amma kunoo ja’a sadaffaa keenyatti Waaqayyo nu gargaaree Waldaan Warra Wangeelaa Oromoo Stockholm Ebla 30 hanga Caamsaa 1,2016 tti Sagantaa dadammaaqiinsa hafuuraa isa jalqabaa geggeessuuf karoorsitee jirti. Sagantaa kana irratti H/w Gammachiis Karrassaa Waldaa Oromoo Frankfurt ,Jarmanii irraa faarfataa Ashannaafii Daggafaa Waldaa Oromoo Oslo, Norway irraa hafeerree jirra.Sagantaa kana irratti yeroon Waaqeffannaa , yeroo dubbii Waaqayyoo waliin barachuu akkasumas rakkoo dhuunfaa fi kan sabaa irratti yeroo itti waliin Waaqayyoon kadhannu ni qabaanna. Sagantaa kana irratti hirmaachuun keessaniin Waaqayyo biraa eebba guddaa akka inni isinii roobsu hubannee nuyi warra waldaa kana geggeessaa jirruu fi saba Oromoo biyyaa Sweedenii keessa jiraatuuf immoo hiika guddaa akka inni qabu dabalee isin yaadachiisun fedha.
Kanaafuu, sagantaa keessan mijeeffattanii iddoo Waaqayyoo karaa tokko ykn karaa lama isinitti dubbatu kana irratti akka argamtaniif jaalala Gooftaan bakka geggeessitoota waldaa kanaa bu’ee hunduma keessan nan hafeera.
Luba Dureessaa Maabashaa
Luba Waldaa Warra Wangeelaa Oromoo Stockholm
On March 11, 2016 March 11, 2016 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Demonstration in Stockholm 11-03-2016
#OromoProtest deeggaruudhan gaafa 11-03-2016 magaala Stockolm keessatti hiriira guddaa gaggeefame. Hiriira kana irratti hawaasnii oromoo Sweden keessa jiran baaynaan irratti hirmaatani deeggarsa ummatta oromoo Oromiyaa keessatti falmachaa jiran maddi kan dhaabbatan ta’u agarsiisan.
Hiriira kana irratti Mootummaan Sweden gargaarsa mootummaa Itiyoophiyaa tiif gochaa jiruu akka dhaabu gaafatamee jira. Humna waraana TPLF Oromiyaa keessa akka bayu fii ummaanni Oromoo biyyaa isaa irratti akka ofiif of bulchuu cimsamee gaafatama oleera.
On March 1, 2016 March 11, 2016 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
On January 23, 2016 January 23, 2016 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Dhuma jia’a Sadaasaa irraa eegalee Oromiyaa keessatti hiriira nagayaa ummanni oromoo adeemsisa jiru deeggaruudhan gaafa Amajji 22-01-2016 magaala Stockolm keessatti hiriira guddaa gaggeefame. Hiriira kana irratti hawaasnii oromoo Sweden keessa jiran baaynaan irratti hirmaatani deeggarsa ummatta oromoo Oromiyaa keessatti mirgaa oromoo kabachiisuf gochaa jiran waan danda’an hundaan kan deeggaran ta’u hubachiisani jiran. Hiriira kan irratti hawaasni ummata Itoophiyaa Sweden jiran fi dhaaboleen siyaasaa adda adda haala adda ta’een baaynaan hirmaachudhaan deegarsaa isaani muldhisanii jiru. Hiriiri kana irratti miseensi Parlamaa Sweden, obbo Anders Österberg argamuudhan haasawa gochudhaan ummaan oromoo tis ta’e ummanni Itoophiyaa hundi gaffii mirgaa gaafachuun isaani sirrii ta’u isaa ragaa bahudhaan deegarsa kan godhan ta’u dubbatanii jiru.
Hiriira kana booda hawaasni oromoo Sweden mara walitti dhufan kun haalaa yeroo ammaa ummanni oromoo itti jiru irratti marii guddaa gaggeessudhan hawaasa oromoo Sweden jiraan sirritti wal ijaarudhaan ummaata Oromiyaa keessattii wareegama guddaa kafalaa jiru karaa danda’ame maraan deeggaruuf waadaa waliif galanii jiru.
Yaamichaa Hawaasa Oromoo Sweden fi firootan oromoo maraaf
On January 17, 2016 January 17, 2016 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Hiriira naga’a (Demonstration in Stockholm)
Marii hawaasa (Discussion on current situation in Oromia and to support the victims)
Guyyaa: Amajjii (January) 22, 2016
Yeroo hiriiraa: 12:00 – 15:00 (Sergel torget)
Yeroo marii: 16:30 – 22:00 ( Kista Torg 7, 16442 Kista)
Contact: Gurmuuoromoo.swidin@gmail.com; 0703854068
”Finfinnee/Addis Abeba Master Plan” is annexation of Oromo land and annihilation of Oromo identity in Finfinnee and its environs
On December 7, 2015 December 7, 2015 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
We members of the Oromoo community in Sweden, Gurmuu Oromoo, would like to bring to the attention of international community the suffering of Oromo people who are continuously being deprived of their internationally recognized human rights by the tyranny regime in Ethiopia.
Violating its own constitution, the TPLF regime is trying to maneuver and implement “Finfinnee Master Plan” despite of the overwhelming rejection by the Oromo people. The forced eviction of Oromos from their ancestral land such as Finfinnee started by the Emperor Menelik II is now underway at a high rate by TPLF, the current successor of Abbysinian oppressive regimes. More and more Oromo villages, towns and farmland surrounding Finfinnee are being taken away by TPLF government and sold to new comers leading to complete destruction of the livelihood of the evicted Oromos.
The TPLF regime is working day and night to fundamentally change the demography in these targeted Oromo areas and facilitate its evil plan of destroying Oromo villages, cultures, and livelihood. What happens to those evicted Oromos is no concern for the TPLF regime. Moreover, this tranny regime has set preconditions to change the original Oromo names of these villages and towns and erase any trace of Oromo connection to these areas. This is what has been practiced by previous Abbysinian regimes.
The TPLF regime is trying to misguide the international community as if the government has achieved high economic development while most of the people suffer from extreme poverty and hunger. In reality, the main sources of this claimed development is obtained by selling out the confiscated Oromo land surrounding Finfinnee and other places at extremely high prices while Oromo farmers are suffering of poverty and exposed to hunger. Oromo people all over the world, especially Oromo school children in Ethiopia, are protesting peacefully against such harassment. However, the regime is killing and torturing these protesters and terrorizing the Oromo people all over Oromia. The current protest since end of November 2015 is the continuation of protest against ‘Finfinnee Master Plan’ started in April 2014, when more than 79 Oromos, mostly youths, were killed and several hundred Oromos were arrested and mistreated. The persecution continues unabated and getting more and more sophisticated, brutal and widespread as we write this paper.
We express our deep concern and anger regarding this unacceptable suffering of Oromo people in general and killing of peaceful school children. The Regime must refrain from this barbaric act, immediately cancel the implementation of unaccepted ‘Finfinnee Master Plan’ and stop evicting Oromo farmers from their land.
We appeal to the international community, international organizations, non-governmental organizations and governments to deliver appropriate leverage on the Ethiopian/TPLF regime to heed to the democratic and humanitarian request of the Oromo people as well as other oppressed people in Ethiopia and refrain from the heinous scheme of reducing the Oromo population to minority in order to have easy control over Oromo resources and force Oromo youths to migrate or remain in poverty.
We demand all-round liberation to the Oromo people and all oppressed people in Ethiopia!
Gurmuu-Oromo Community in Sweden (December 4, 2015)
Waamicha kabaja ayyaana Irreecha bara 2015, Sweden
On September 11, 2015 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Sweeden magaala Sundsvall keessatti ayyaanni Irreecha 2015, Onkololeessa 10, 2015 waan kabajamamuuf akka hirmaatan kabajaan affeerramtaniitu.
Hawaasni Oromoo biyyaa Swiidin kitaaba HADHOOFTUU sirna owwadhaan eebbise
On March 17, 2015 March 17, 2015 By gurmuuoromooswidinLeave a comment
Kitaaba asoosamaa HADHOFTUU kan Caalaa Haa hiluu tiin bareeffame magaalaa Stockholm/Sweden itti gaafa Guraandhala 28, 2015 sirna owwadhaan eebbisifame. Sagantaa kana irratti haala guddina Afaan fi Og-barruu oromoo ilaalchisee seeminarri beektota addaa addaatin kennamee jira. Akkasumas barreesitootni fi gaazexeessitootni biyya Sweden kan akka Martin Schibbye akka kessuummaatti qophii kana irratti argamanii jiru. Qophiin akkana kun guddina Afaan, Og-barruu fi Aadaa oromoo akkasumaas Oromummaan akka dagaagu gochuuf gummaacha guddaa kan qabu ture. Gurmuu Hawaasa Oromoo Sweden namoota qophii kana irratti argaman hundaa galata galcha.